Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment मकैबारीमा लखेटी लखेटी ह'त्या, २४ घण्टाभित्रै समातिए ह'त्यारा ! - Pnpkhabar.com
मकैबारीमा लखेटी लखेटी ह’त्या, २४ घण्टाभित्रै समातिए ह’त्यारा !
दाङ : व्यक्ति ह’त्याको आरोपमा दाङ प्र’हरीले ३ जनालाई प’क्राउ गरेको छ। प’क्राउ पर्नेहरुमा राप्ती गाउँपालिका–६ निवासी ४८ वर्षीय मणिराम चौधरी, सोही ठाउँका ३८ वर्षीय धनबहादुर चौधरी र ३३ वर्षीय मोतीलाल चौधरी रहेका जिल्ला प्र’हरी कार्यालय दाङले जनाएको छ।
उनीहरुले बिहीबार दिउँसो करिब १२ बजेतिर त्यही ठाउँका ४० वर्षीय मोतिलाल चौधरीलाई दाउराको चि’र्पटले हा’नेर ह’त्या गरेका प्र’हरीको आरोप छ। उनीहरू शुक्रबार पक्राउ परेका उनीहरूले रिसिइबीकै कारण चौधरीकै घर नजिकै मकैबारीमा लखेटी लखेटी ह’त्या गरेका प्र’हरीले बताएको छ।
ह’त्या गरी कुलोमा फालिएको अवस्थामा चाैधरीको श’व फेला परेको थियो। अनुसन्धान क्रममा घ’टनाको र’हस्य बाहिरिएको हो। प’क्राउ परेकाहरूमाथि ज्या’नसम्बन्धी मु’द्दामा अनुसन्धान भइरहेको दाङ प्र’हरीले जनाएको छ। ती तीनै जनालाई घ’टनाको २४ घण्टा नबित्दै प्र’हरीले समातेको थियो।